Igumbi elipholileyo - uzive ngathi usekhaya ...
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguMaria
Thatha ixesha elifanelekileyo lokuphuma. Ungahlala ubusuku ubetha indlela kwakhona okanye uchithe iintsuku ezimbalwa. Wamkelekile uwedwa ngokunjalo nangababini. Sikunika igumbi lasekhaya elibengezela intuthuzelo kunye nendalo emangalisayo enamathuba amaninzi okufumana kunye nokonwabela imimangaliso yendalo. Ungahamba ngebhayisekile ezintabeni, ukukhwela intaba, ukutyibilika, ukutyibilika, ukukhwela ikhephu, okanye ufumane nesixeko esihle sase-Innsbruck. Akunyanzelekanga ukuba uye kude.
Ligumbi elipholileyo kakhulu kwaye likhululekile kwi-ore ezimbini ezinegumbi lokuhlambela kunye nebholcony enombono omangalisayo weentaba. Ngexesha lasebusika ungonwabela isidlo sakho sakusasa kwigadi yethu kwaye ngokuhlwa ungangcamla iishafu zokugqibela zokukhanya kwelanga kwibalcony yakho enkulu yabucala.
Yiba nexesha elimnandi, wonwabe, uphumle kwaye uzenze ukhululeke. Uya kukufumanisa kulula ukwenza oko kwindawo yethu.
Kukho indawo yokupaka ekhoyo phambi kwendlu yethu- simahla. Kwakhona, uyamenywa ukuba usebenzise iWLAN yethu yasimahla.
Isidlo sakusasa sifumaneka ukusuka ngo-8am ukuya ku-10.00am. Sibiza €7,-- umntu ngamnye ngesidlo sakusasa sethu. Nceda usazise ukuba ufuna isidlo sakusasa ngenye imini ngaphambili.
4.95 out of 5 stars from 588 reviews
4.95 · Izimvo eziyi-588
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi588
UPawulos okanye mna sihlala sisekhaya ngemibuzo njl.njl.